Kacha mma IQF broccoli Manufacturer na Factory | Obodo
IQF agwakọtara inine
IQF peas akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Broccoli nwere aha dika nri nri. Ọ dị obere kalori mana o nwere ọtụtụ nri na antioxidants na-akwado ọtụtụ akụkụ nke ahụike mmadụ.
Broccoli bụ akwụkwọ nri cruciferous, n'akụkụ kale, kọlịflawa, Brussels na-epulite, bok choy, kabeeji, elu collard, rutabaga, na turnips.
Akwụkwọ nri a na-akpọ Cruciferous nwere ọtụtụ antioxidants, nke nwere ike inye aka gbochie ụdị mbibi mkpụrụ ndụ nke na-ebute kansa. Ihe ndị ọzọ nwere ike inye aka mee ka ahụike dịkwuo mma, mee ka ahụike dị mma, melite ahụike anụ ahụ, enyemaka mgbaze, belata mbufụt, belata ihe ize ndụ nke ọrịa shuga ma chekwaa ọrịa obi.
Onu ogugu na broccoli otu iko (76g)
4,78 g, tinyere 1 g shuga
Folate (microgram [mcg])
Lutein na zeaxanthin (mcg)
Mgbe ịzụrụ broccoli, ndị mmadụ kwesịrị ịnwale ịhọrọ iberibe nke siri ike ma sie ike na-emetụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara ọchịchịrị. Zere iberibe iberibe ụkwụ, na-acha odo odo, ma ọ bụ na-akwacha.
Broccoli ohuru, nke n’eto eto ekwesighi igha uto ahihia, akuko ma obu sulfurous. Broccoli nwere ike ibu osisi ma ọ bụ fibrous ma ọ bụrụ na mmadụ echekwa ya na ụlọ okpomọkụ ma ọ bụ ogologo oge.
Chekwa broccoli a na-asachaghị na akpa rụrụ ma ọ bụ nke nwere oghere na drawer drawer nke ngwa nju oyi. Ndị mmadụ kwesịrị ịsacha broccoli naanị tupu ha eri ya, n'ihi na broccoli mmiri nwere ike ịzụlite ebu ma bụrụ ụkwụ.
Ngwaahịa IQF broccoli
Nkọwapụta 30-50mm 、 40-60mm
Ndenye zuru ezu
Ngwugwu 10kg katọn n'ime 1kg plastic akpa ma ọ bụ dị ka ndị ahịa chọrọ
Adị ndụ 24 ọnwa n'okpuru -18 ℃ nchekwa
Na-adọnye Ogwe 24 mts / 40 dị ka nchịkọta dị iche iche
Nri / isi Ọhụrụ & Ahụkarị
Ebe Mmalite Fujian, China
Asambodo BRC / FDA / KOSHER / HACCP / SEDEX / HALAL
Aha Akara Obodo
Inye Oge Afọ
Tụkwasịnụ Ikike 200 MTS kwa ọnwa
Portpụ Port Xiamen
Etiti oge 1-24 tọn: daysbọchị iri
> Tọn 24: ka ekwurịta
Nke gara aga: IQF ojii ero julienne & sliced
Osote: IQF kabeeji diced
Oyi Broccoli Oyi
Oyi bu Broccoli Florets Oyi
Oyi kpọnwụrụ Friji
Oyi kpọnwụrụ Broccoli Smoothie
Achịcha Oyi kpọnwụrụ
Ebido Friza Oyi kpọnwụrụ
IQF kabeeji diced
Agwa agwa IQF